Indlu yamaplanga entabeni etofotofo enendawo yokubasa kwigumbi lokuhlala - I-Airbnb
Indlu yamaplanga entabeni etofotofo enendawo yokubasa kwigumbi lokuhlala
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguIda
Indlu yamaplanga esentabeni esemaphandleni kwintsapho enobuhlobo neGräftåvallen. Kwindlu yethu esemaphandleni, uhlala kamnandi ukuya kutsho kubantu abayi-7. Kwigumbi lokuhlala, uza kufumana itafile enkulu yegumbi lokutyela ibe ngaphakathi kukho ikhitshi elinento yonke efunekayo ukuze upheke izidlo ezahlukahlukeneyo. Ukuba ufuna ukutya okukhawulezayo, kufudunyezwa lula kwi-microwave kwaye, kukho ne-waffle iron. Kwigumbi lokuhlala, unokuhlala kwisofa eqinileyo uze wonwabele umzuzwana phambi kwendawo yokubasa umlilo. Igumbi lokuhlambela lisandul 'ukulungiswa ngeshawa nesinki elala abantu ababini.
I-Fjällstugan ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo (malunga nemizuzu eyi-10) ukuya eGräftåvallens ski resort, indawo elungele intsapho yokutyibilika ekhephini malunga neyure ngaphandle kweÖstersund. Kwindawo yokutyibiliza kwikhephu yiFjällgården kunye nevenkile yokutyela entle kunye nobomi obuncinci basekuhlaleni.
Kumgama wemizuzu nje embalwa xa uhamba ngeenyawo kukho iikhilomitha eziliqela zeendlela zokutyibiliza ekhephini ezilungiselelwe kakuhle abo bakhetha ukutyibilika ekhephini kwilizwe. Ukuze ufumane ukutyibilika ekhephini okuphucukileyo, uthatha imoto ngaphezu kwekota yeyure ukuya eBydalen, indawo yesihlanu enkulu yokutyibilika ekhephini eSweden. I-Bydalen yaziwa ngokukroba kakuhle nemigca ephakamileyo. Thatha ixesha lokuhlala endulini okwethutyana kwaye uza kunikwa nexesha elimnandi kakhulu kwindalo yaseSweden.
Ukuba ukhetha ukunyuka intaba, uza kutyelela ehlotyeni okanye ekwindla. Emva koko kukho namathuba okuloba kunye nokulanda i-berry kwi-Oviksfjällen entle. Kwabo bafuna ukuqubha, iHeggåssjön icetyiswa apho unokuhamba ngemoto ngaphantsi kwemizuzu eyi-10.
Le ndlu isandul 'ukulungiswa ngegumbi lokuhlambela elitsha. Ngaphezu koko, kukho igumbi elikhulu lokuhlala apho itafile enkulu yokutyela imi ecaleni kweefestile ezinkulu ezintathu ezenza kubekho ukukhanya okwaneleyo. Ngaphezu koko, kukho nekhitshi elineendawo zokusebenzela ezintle ne-microwave efihlakeleyo kwikhabhathi esecaleni kwefriji nefriji, kwabo bakhetha ukuchitha ixesha emathafeni phambi kwesitovu. Isofa enkulu iphambi kwendawo yomlilo enobushushu nobutofotofo kwabo bafuna ukutshisa. Kulala abantu abayi-7 kwahlulwe kumagumbi okulala amathathu ohlukeneyo.
Igumbi lokulala eliyi-1 elinendawo yokulala elala abantu ababini neendawo zokugcina izinto ezintle onokukhetha kuzo.
Igumbi lokulala 2 elinebhedi engentla apho ibhanka esezantsi ilala abantu abayi-2 nomntu omnye ongasentla.
Igumbi lokulala 3 elinebhedi engentla kwenye elala abantu abayi-2.
Kwiholo esandul 'ukulungiswa kukho into eyenza kufudumale phantsi, kunjalo negumbi lokuhlambela elisandul' ukulungiswa. Igumbi lokuhlambela linesinki ephindwe kabini, ishawa kunye nendlu yangasese enodonga.
Ibhalkhoni ikufutshane nekhitshi kunye nefenitshala yangaphandle ukuze ukwazi ukusebenzisa ixesha lonyaka kwaye, ngokomzekelo, thatha i-waffle kunye ne-cream kunye ne-cloudylvania jam.
Izinto zebhedi neetawuli ziqukiwe ibe ukucoca kwenziwa ngumntu oqeshayo. Ukuba awufuni ukuzicoca, inkonzo yelali kaBydalen iyafumaneka ukuba uyiqeshe. Kucetyiswa ukuba ubhukishe kwangethuba xa ucoca.
I-Fjällstugan ikwindawo entle nelungele intsapho yokutyibilika ekhephini i-Gräftåvallen, iyure ngemoto ngaphandle kwe-Östersund.